कसले लठ्याए महारा र रोशनीलाई ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » कसले लठ्याए महारा र रोशनीलाई ?
कसले लठ्याए महारा र रोशनीलाई ?
सभामुख पदबाट राजिनामा दिनु भएका कृष्णबहादुर महारा र संसदीय सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाही बीचको सम्बन्धलाई लिएर अहिले बजार तातिएको छ ।
नेकपाका नेता समेत रहनु भएका महरा रोशन शाहीको घरमा जानु भएको छ कि छैन । रोशनी शाहीलाई बलात्कार भएको छ कि छैन त्यसको औपचारीक पुष्टि कहीबाट भएको छैन । असोज १५ गते यो समाचार तयार पार्दासम्म घटना अन्योलमा देखिन्छ ।
हाम्राकुरा डट कमलाई शुरुमा दिएको अन्तरवार्तामा रोशनीले महराबाट आफू बलात्कृत भएको भन्नुभएको थियो । महराको टुटेको चश्मा र जुत्ताको पैताला पनि सञ्चारमाध्यमलाई देखाउनु भएको थियो । असोज १२ गते आइतवार राती महराले आफैसँग रक्सी र केही खानेकुरा साथ ल्याउनु भएको कुरा पनि रोशनीले सञ्चारमाध्यमलाई देखाउनु भएको छ ।
महराले आफूसँग जवरजस्ती गर्न खोज्दा जताततै निलडाम परेको पनि देखाउनु भएको छ । त्यति मात्र होइन, राती सो घटना भएपछि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, नेकपाका नेतृ पम्फा भुसाल, ओन्सारी घर्तिमगर, महराका छोरा राहुल महरा लगायतलाई आफूमाथि भएको दुरव्यवहारको जानकारी आफूले म्यासेजमार्फत गराएको उहाँले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
यहाँसम्म कि सोही दिन राती प्रहरी आएर रोशनी बस्ने घर तथा कोठाको छानविन गरी फोटो तथा भिडियो खिचेर लगेको छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज १४ गते आइजीपी सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई बोलाएर सबै प्रमाणको अध्ययन गरिसक्नु भएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सीसीटीभीको फोटोदेखि लिएर सञ्चारमाध्यममा आएको रोशनीको अभिव्यक्ति पनि सुन्नुभयो । यो सारा प्रमाणहरु बाहिर आइसकेपछि रोशनीले आफ्नो बयान फेर्नुभएको छ । तत्कालिन माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता रहनु भएका रोशनीले असोज १४ गते नागरिकखबर डट कमसँग अन्तरवार्ता दिँदै महरा आफ्नो घरमा नआएको, आफूसँग कुनै त्यस्तो दुरव्यवहार नभएको भन्नुभएको छ ।
टुटेको चश्मा श्रीमान रहेको र त्यो जुत्ता महराको नभएको भन्दै रोशनीले आफूले सञ्चारमाध्ममा बोल्दै नबोलेको कुरा बाहिर आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । महरा आफ्नो बुवा समान हुनुहुन्छ, उहाँसँग आफ्नो पुरानो चिनजान रहेको बुवा–छोरीको जस्तो सम्बन्धलाई लिएर त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध जोडेर मेडियाले प्रचार गरेको अरोप लगाउँदै उहाँले सञ्चारमाध्यममा आफूलाई जवर्जस्ती बोल्न लगाएको पनि दिावी गर्नुभएको छ ।
यता, महाराको कुरा पनि बाँझिएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएको कतिपय समाचारमा आइतवार (असोज १२) गते रोशनीको घरमा गएको भन्नुभएको छ भने कतिपय समाचारमा आफू उहाँको घरमा गएकै छैन्न भन्नुभएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कुरा गर्दा आफू रोशनीको घरमा नगएको भन्नुभएको छ भने सोही पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुरा गर्दा रोशनीको घरमा गएको तर उहाँले लगाएको आरोप जस्तै केही पनि नभएको भन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोध्दा रोशनीको घरमा नगएको भन्नुभएको छ । उहाँको सचिवालयले निकाले विज्ञप्तिमा पनि महारा रोशनीको घरमा नगएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । महरा रोशनीको घरमा उहाँलाई बलात्कार गर्नुभएको छ कि छैन त्यो त अनुसन्धानले पुष्टि गर्दै गर्छ तर जसरी जे जे कुरा बाहिर आएको छ त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ थुप्रै छ । रोशनीले आफू डिप्रेशनमा रहेको अवस्थामा त्यस्ता कुराहरु बाहिर आएको भनिरहनु भएको छ । डिप्रेशनको औषधी ओभरडोज लिएका मान्छे अनियन्त्रित हुन्छ र मान्छेले अनौठो कृयाकलाप गर्छन् । पागल जस्तो हुन्छ आफैले आफैलाई चिथोर्ने, आफैले आफ्नो टाउको बजार्ने काम गर्ने गर्छन् भनि डाक्टरहरुको भनाई छ । रोशनीलाई त्यो ओभर डोजको पनि असर हुनसक्छ भन्नेहरु पनि छन् ।
यता, असोज १३ गते दिनभरि महरा डिप्रेशन (तनाव) मा पनि देखिनु भएको थियो । रक्सी खाएपछि ह्याङ ओभरमा देखिनु भएको थियो । उहाँले जति जनासँग कुरा गर्नुभयो ती सबैसँग फरक फरक कुरा गर्नुभएको देखिएको थियो । दुवैजना डिप्रेशनको शिकार भएको देखिन्छ । कुरा जसरी बाँझिएको छ, फरक फरक आएको छ उहाँहरु रक्सी खाएको वा केही लठिने–मातिने खानेकुरा खाएर लठिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर उहाँहरुलाई यसरी कसले लठ्याए त्यसको अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ ।
अर्को कुरा, रोशनी पूर्व माओवादी भएपनि उहाँको सम्बन्ध काँग्रेसहरुसँग बढी देखिन्छ । उहाँको फेसबुक अध्ययन गर्दा उहाँ माओवादी अर्थात अहिलेका नेकपाको कट्टर विरोधी देखिनुहुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाही र रवी लामीछानेका समर्थक हुनुहुन्छ । उहाँले महाराबाट बलत्कृत भएको कुरा नेपाली काँग्रेसका एउटा महिला सांसदलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
ती महिलाले नै अन्य पत्रकारहरुलाई भनेपछि यो कुरा बाहिर आएको हो । हाम्रोकुरा डट कमका सञ्चालक अजयबाबु सिवाकोटी काँग्रेस निकट पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँले हो यो घटनाको खुलासा गर्नुभएको । तर अहिले रोशनीले सिवाकोटीले आफूलाई जवर्जस्ती बोल्न लगाएको र यो ‘रअ’ को मान्छे हो भनि आरोप लगाउनु भएको छ । रोशनीले आइतवारदेखि आफ्नो फेसबुकमा जसरी लगातार पोस्टहरु गरिरहनु भएको छ, त्यसले थाह हुन्छ कि रोशनीको साँच्चै डिप्रेशनमा हुनुहुन्छ ।